सय वटाभन्दा कम गुलाब पठाएँ भने अरू कसैसँग बिहे गर! :: Setopati
सय वटाभन्दा कम गुलाब पठाएँ भने अरू कसैसँग बिहे गर! कोरियन कथा
भक्तप्रसाद गैरे कात्तिक १
युमी र सान्हो सानैदेखिका साथी थिए। दुवैले प्राथमिक तहको पढाइ सँगै सके।
त्यो छोरीचेलीको औपचारिक शिक्षामा कमै चासो दिने बेला थियो। त्यही भएर युमीको थप पढ्ने चाहना पूरा हुन सकेन।प्राथमिक तहको शिक्षा पूरा गर्न पाउनु नै युमीका लागि वरदान भयो।
सान्हो भने छोरा मान्छे। त्यसमाथि अत्यन्तै मेहनती, लगनशील र अनुशासित। उसको पढाइमा कोही बाधा बनेन। विद्यालय तहको पढाइ सकेपछि ऊ उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने भयो।
युमी र सान्होले एकअर्कालाई मन पराउन थालेका थिए। युमीलाई सान्हो विदेश नगइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो। सान्होलाई पनि आफ्नो गाउँघर र युमीलाई छाडेर जाने मन त कहाँ थियो र? तर, उसले मनको कुरा व्यक्त गर्न सकिरहेको थिएन।
दुवै छटपटाइरहे। मनका कुरा एकअर्कालाई भन्न सकेनन्।
आखिर सान्हो विदेश जाने दिन आइछाड्यो। वरपरका मान्छे सान्होको घर आएका थिए। सबै खुसी देखिन्थे। सान्होलाई बधाइ, शुभकामना दिइरहेका थिए।
सान्होले चारैतिर आँखा दौडायो। भिडमा सबै थिए, तर युमी थिइन। यसो एकचोटि देख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागे पनि सान्होले खासै वास्ता नगरेझैं गर्‍यो।
सबैको आशीर्वाद लिइसकेर सान्हो विदेशी यात्रामा अगाडि बढ्यो। घर छाडेर अलि पर पुग्नासाथ उसले युमीलाई देख्यो। युमी सान्होको घर नआएकी कहाँ हो र? तर, घरसम्म पुग्ने हिम्मत आएन उसलाई। बाटो छेउमै बसेर कुरिरही।
सान्होले आँखा उठाएर युमीलाई हेर्‍यो। दुवैका नजर जुधे। युमी निराश र हतास देखिन्थी। सान्होसँग छुट्नुपर्दाको पीडा उसको अनुहारमा स्पष्ट देखिन्थ्यो। युमीका आँखाबाट दुई थोपा आँशु तप्प खसे। आजसम्म एकले अर्कोलाई भन्न नसकेका कुरा त्यो छोटो समयमा कसरी भन्ने? दुवै अवाक् भए।
सान्होलाई अबेर भयो कि? युमी झन् अत्तालिई।
'बिर्सन्छौ होला केरे?' युमीले सन्नाटा चिर्दै भनी।
'कहाँ बिर्सनु?' सान्होले हठात् जवाफ फर्कायो। मानौं उसलाई केही भएकै छैन। कुनै कुराको मतलबै छैन।
'राम्रो गरे,' यति भन्नेबित्तिकै युमीको वाक्य फुटेन, तर्रर आँशु खसे।
सान्होले पनि अब आफूलाई सम्हाल्न सकेन। सबै कुरा एकैसाथ ओकल्यो।
'युमी म पनि तिमीलाई मन पराउँछु। विदेशमा पढाइ सकेर आएपछि बिहे गरौंला, अनि सँगै बसौंला। मलाई केही समय कुरेरै बसे है। म विदेश गएको एक वर्षपछि तिमीलाई चिठी पठाउँछु। चिठीसँगै सयवटा गुलाबको गुच्छा पनि पठाउँछु। मैले सयवटाभन्दा कम फूल पठाएँ भने तिमीले अरू कसैसँग बिहे गरे, नत्र मलाई कुरेर बसे ल,' सान्होले भन्यो।
अघिदेखि घोसेमुन्टो लगाएर बसेकी युमी सान्होको कुरा सुनेर प्रफुल्ल भई।
यतिका दिन उसले सान्होको यही कुरा सुन्न त कुरेकी थिई। उसको मन चंगा भयो।
हातमा सानो कपडाको कुटुरो लिएर आएकी रहिछ युमीले, नबोली सान्होलाई दिई।
सान्होले अचम्म मान्दै त्यो पोको लियो र युमीलाई बिदाइका हात हल्लायो।
बस चढेर एयरपोर्ट पुग्दासम्म युमीको कोसेली सान्होको हातमै थियो। उसले लगेजमा राख्न पनि भुल्यो। एयरपोर्टमा सामान जाँच्दा थाहा भो, युमीले सलमा पोको पारेर आमाले बनाएको किम्छी ल्याइदेकी रहिछ।
युमीलाई सम्झेर सान्होको मन भरिएर आयो। एयरपोर्टका कर्मचारीले किम्छी लान मिल्दैन भने। ऊ सल मात्र बोकेर विदेश उड्यो।
प्लेनभित्र पनि सान्होले युमीको सल धेरैपटक सुँघ्यो। सलबाट हल्का किम्छीको गन्ध आइरहेको थियो।
एक वर्ष बित्यो, युमीले कहिले सान्होले गुलाब पठाउला भन्दै प्रतीक्षा गर्दै रही। नभन्दै एकदिन हुलाकीले एउटा पार्सल ल्याएर युमीलाई दियो। उसले हत्त न पत्त खोलेर हेरी। भित्र टन्नै गुलाबका फूल थिए।
युमी हतारिँदै कौसीमा गई। यता उता हेरी र गुलाबका थुंगा गन्न थाली।
'एक, दुइ, तीन ... उनान्सय!' ऊ झसंग भई।
'ओहो! एउटा कता गयो?' ऊ हड्बडाई।
फेरि गनी, उनान्सय!
यसपालि एकदमै विस्तारै गनी, फेरि उनान्सय।
उसले कतै दुइटा फूल एउटैमा टाँसिएको छ कि भनेर एक एक फूल फेरी गनी। अहँ, उनान्सयको उनान्सय नै।
दसौंचोटि गनी, हरेकचोटि उनान्सय।
आकाश खसेजस्तै भयो, चारैतिर अँध्यारो छायो।
युमी सम्हालिन सकिन। सबै फूल कौसीमै मिल्काएर कोठामा गएर सुती। खाना खान मन लागेन, बिसन्चो भएको बहाना गरी।
सुते पनि निद्रा कहाँ पर्नु? सारा संसार सुतेको छ, युमी एक्लै ब्युँझेकी छ।
टहटह जून लागिरहेको थियो। युमी उठेर कौसीमा गई। फेरि गुलाब गन्न थाली। दुई-तीनपटक गनी। चार-पाँचपटक गनी। जति गने पनि गुलाबको संख्या उनान्सय नाघेन।
युमीले लामो सास फेरी।
'आखिर ऊ केटामान्छे त हो,' युमीले गुलाबका फूल बारीतिर हुत्याई र कोठामा झरी।
गुलाब बेरेर ल्याएको पार्सलको बक्स ढोकामै रहेछ। स्ट्राइकरले फुटबल हानेझैं सान्होले पठाएको गुलाबको बक्सलाई युमीले लात्ताले हानी।
केही दिनपछि बारीमा मुर्झाएका गुलाबका थुंगा देखेर आमाले युमीलाई सोधिन्। युमी केही नबोली जुरुक्क उठेर गई। गुलाबलाई किचिमिची पारेर टुक्राटुक्रा बनाएर परै हुत्याई। फर्कंदा शितले भिजेको गुलाबको बाकस देखी। त्यसलाई पनि खुट्टाले छेउमा मिल्काई। अनि कोठामा गएर धुमधुम्ती बसी।
आमा अचम्म मान्दै सुसेधन्दामा लागिन्। युमीले फेरि के सोची कुन्नि? बाहिरबाट गुलाबको बाकस उठाएर ल्याई, अनि खाटमुनी राखी।
त्यो बेला अहिलेजस्तो टेलिफोन, इमेल, इन्टरनेट सुविधा थिएन। कतै कसैलाई सम्पर्क गर्ने एउटै माध्यम चिठी नै थियो।
सान्होले युमीबाट कुनै चिठीपत्र पाउन सकेन। आफूले पठाएको गुलाब युमीले पाई कि पाइन, पाएको भए कति खुसी भई होली!
सान्होले चारवर्षे विदेशी पढाइ पूरा गर्‍यो, अनि स्वदेश फर्क्यो।
गाउँ पुगेपछि थाहा भयो, युमीको त बिहे पनि भइसकेछ। सान्हो झसंग भयो, पुराना दिन सर्सर्ती सम्झ्यो।
‘युमीले मैले पठाएको गुलाब पाइनछ कि क्या हो, मलाई चार वर्ष पनि कुर्न सकिन’ भन्दै दु:खी भयो।
समय बितिसकेको थियो, सोचेर पनि केही फाइदा थिएन।
केही समयपछि कोरियनहरूको ठूलो चाड ‘छुसक’ आयो । युमी छोरा लिएर माइत आई। उसले सान्हो फर्केर आएको थाहा पाई।
‘ओहो अझै बिहे पनि नगरेको, भेटे कसरी बोल्नु? जेसुकै होस्। धोकेबाज!’ युमीले मनमनै सोची।
सान्होले पनि युमी गाउँ आएको थाहा पायो। भेटौं कि नभेटौं भयो।
अब जे भए पनि एकचोटि भेटौं न- सान्हो आफैं युमीको घर गयो। बाबुआमासँग छुसकको शुभकामना साट्यो। युमी कता गएकी रहिछ, देखिइन। युमीको छोरो हजुरआमासँग खेल्दै थियो। एकैछिन बसेर सान्हो घर फर्क्यो।
युमी बाटैमा भेटिई। युमी सान्होलाई देखेर खङग्रङ्गै भई, लाजले रातो पनि।
यसपालि सान्होले नै मुख खोल्यो, 'युमी बिहे गरिछौ त, बच्चा पनि भएछ! गुलाब पाइनौ र?'
'गुलाब त पाएँ, तर सयवटा पठाएनौ त,' युमीले उत्तर दिई।
'कतिवटा थियो त?' सान्होले सोध्यो।
'उनान्सयवटा,' युमीले भनी।
'ए भनेसी चिठी पढिनछौ है, ल त नि राम्रो गर्‍यौ, यो लिएर जाऊ,' उसले भन्यो।
यति भनेर सान्होले आफू विदेश जानुअघि युमीले किम्छी पोको पारेर दिएको सल युमीलाई दियो र घरतिर लाग्यो।
युमी पनि झसंग हुँदै घर पुगी। कोठामा गई, खाटमुनी हेरी। सान्होले गुलाब पठाएको बक्स खाटमुनि नै रहेछ। उसले बक्स खोलेर हेरी, सानो चिठीको टुक्रो पनि रहेछ।
'युमी, म तिमीलाई साह्रै माया गर्छु। तिमीलाई पनि थाहा छैन, म तिमीलाई कति धेरै माया गर्छु भनेर। सयवटा गुलाबको फूल पठाउँछु भनेको थिएँ नि, ९९ वटा पठाएको छु ल! किनकि मैले मन पराएको सबभन्दा राम्रो गुलाब त तिमी हौ नि! सँगै मिलाएर सय भएन त? सबै बिर्सेर केही समय मलाई कुर ल!'
युमीको बोली फुटेन।
(यो कथा क्युंगही विश्वविद्यालयमा कोरियन संस्कृति अध्यापन गराउने गुरू सङ्गशिन योङ्गले सन् २०११ मा हामीलाई मौखिक सुनाउनुभएको थियो। त्यही आधारमा मैले कथा तयार पारेको छु।)
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक १, २०७७, ०६:२६:००
अब कसैसँग सम्बन्ध गाँस्दिनँ!